Volavola ho an'ny famokarana - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Ny famolavolana ny famokarana (DFM) dia ny fanamorana ny vokatra mora sy tsy dia lafo vidy intsony. Ireo injeniera Fumax Tech dia manana traikefa an-taonany maro miaraka amina teknika DFM isan-karazany. Ity traikefa DFM ity dia hampiasaina hampihenana ny vidiny sy hanafoanana ireo olana mifandraika amin'ny famokarana ny vokatrao.
Ireo injeniera Fumax dia mahafantatra tsara ny fizotry ny famokarana, ny injeniera Fumax dia mijanona amin'izao fotoana izao amin'ny teknolojia famokarana farany, noho izany ireo teknolojia ireo dia azo ampiharina hamokarana ny famolavolana vokatra tsara indrindra. Ny fahalalan'izy ireo amin'ny famokarana dia ampiharina amin'ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famolavolana mba hahazoana antoka fa ny vokatra farany dia tsotra hivory raha mbola mahafeno ny fepetra takian'ny vokatra rehetra.
Zavatra tsara momba ny deisgn miaraka amin'i Fumax:
1. Fumax dia orinasa iray. Hainay ny dingana rehetra amin'ny famokarana. Ny mpamoron-tsainay dia manana fahalalana lalina isaky ny fizotran'ny fanodinana. Ka ny mpamoron-tsaintsika dia hitadidy ao an-tsaina mandritra ny fizotran'ny famolavolana azy ireo ho an'ny famokarana mora, ohatra, ny fizotran'ny SMT, ny famokarana haingana, ny fisorohana amin'ny ampahany amin'ny lavaka, ny fampiasana ampahany SMT bebe kokoa amin'ny effiecency.
2. Fumax dia mividy singa an-tapitrisany. Noho izany, manana fifandraisana tena tsara amin'ireo mpamatsy singa rehetra izahay. Azontsika atao ny misafidy ny singa kalitao tsara indrindra saingy amin'ny vidiny ambany indrindra. Izany dia hanome fahaizana mitaky vidiny lehibe ho an'ny mpanjifantsika.